कति छ एमाले अध्यक्ष केपीको ओलीको तलब ? – Nepal Parikrama
कति छ एमाले अध्यक्ष केपीको ओलीको तलब ?
काठमाडौं,असार १३ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट पेश गरेपछि यतिबेला बहस बजेटकै आसपासमा केन्द्रीत छ । बजेटको पक्ष र विपक्ष त छदै छ त्यो भन्दा बढी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसददेखि कर्मचारीसम्मको बढेको तलबको चर्चा अझ बढी छ । तर, तपाईलाई थाहा छ तलब बढेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तलब कति छ ? एमाले अध्यक्ष ओलीको मासिक पारिश्रमिक अर्थात तलब १० हजार रुपैंया छ । यो रकम उनलाई केन्दी्रय सदस्य भए वापत पार्टीले दिएको हो । सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले आफ्ना सबै केन्द्रीय सदस्य
अझ रोचक त के छ भने एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्दा ५ हजार रुपैंया बढी तलब खान्छन् एमाले अञ्चल इन्चार्जहरुले । एमालेमा अहिले एक सय ८४ जना केन्द्रीय सदस्य छन् । ती सबै केन्द्रीय सदस्यले मासिक १० हजारका दरले तलब बुझ्छन् । अनि १४ अञ्चल र राजधानी गरी १५ अञ्चल इञ्चार्जहरुले १५ हजार र सहइन्चार्जहरुले मासिक १४ हजारको दरले तलब खान्छन् । एमालेले प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र आफ्ना सबै केन्द्रीय नेताहरुको बैंक खातामा इसेवा मार्फत तलब जम्मा गरिदिन्छ ।
एमालेले आफ्ना नेतालाई तलब त दिन्छ तर यति धेरै नेतालाई तलब दिने श्रोत चांहि के हो त ? एमालेले आफ्ना प्रत्येक सांसदबाट मासिक १० हजार रुपैंया लेबि काट्छ । अहिले एमालेका १८४ जना सांसद छन् । यस्तै, २ लाख ५७ हजार संगठित सदस्यबाट उठ्ने लेबी एमालेको प्रमुख आम्दानीको श्रोत हो ।
प्रधानमन्त्रीबाट २५ हजार, उपप्रधानमन्त्रीबाट १५ हजार र मन्त्रीबाट १४ हजार् लेबी पनि उठाउंछ एमालेले । अनि राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरुबाट खुद तलबको १० प्रतिशत लेबी पनि एमालेले उठाउदै आएको छ । यसरी तल्लो तहको कार्यकर्ता लेवि तिर्नेमा मात्र सिमित रहेका छन भने केन्द्रिय समितिका सदस्य सहितका नेता तिनै कार्यकर्ताले वुझाएको लेवीबाट तलव खाइरहेका छन् ।
Published On: १३ असार २०७३, सोमबार ०९:०४